दैनिक राशिफल: ११ मार्च २०१ - - PAMPEREDPEOPLENY.COM - INSYNC
घर Insync जीवन जीवन लेखा-शबाना कच्छी द्वारा शबाना काची मार्च ११, २०१ on मा राशिफल ११ मार्च २०१ | | मार्च ११, २०१ Daily दैनिक राशिफल | दैनिक राशिफल ज्योतिष | बोल्डस्की
सोमबार हप्ताको पहिलो दिन हो र हामी सबै सोमबार ब्लूज अनुभव गर्दछौं। तर यदि के तपाईंलाई थाहा छ कि आज तपाईं पदोन्नती पाउनुहुनेछ वा तपाईंको लागि स्टोरहरूमा राम्रो समाचार छ? के तपाई उत्सुकतापूर्वक दिन सुरु हुनलाई पर्खनुहुन्न?
त्यो ज्योतिषको शक्ति हो। यसले तपाईंको भविष्यको भविष्यवाणी गर्दछ ताकि तपाईं आफ्नो भाग्य नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ र अझ राम्रा चीजहरू बनाउँनुहुनेछ। ट्राभल केहीका लागि कार्डमा रहेको छ, जबकि केहिलाई तिनीहरूको व्यवसायमा नाफा कमाउने भविष्यवाणी गरिएको छ। तपाईंको राशि चिन्हले तपाईंको बारेमा के भन्छ भनेर जान्नको लागि पढ्नुहोस्।
यहाँ मार्च ११ औ २०१ 2018 को लागि तपाइँको दैनिक राशिफल छ।
मेष: २१ मार्च -२० अप्रिल
तपाइँको दिनको लागि एक उत्कृष्ट सुरूवात हुनेछ। तपाईलाई जादू जस्तो गोप्य विज्ञान सम्बन्धी वार्ताको कुराकानी हुने भविष्यवाणी गरिएको छ। समाजमा सम्मान भनेको सबैको लागि चाहिने कुरा हो र तपाईले त्यहि प्यारो अरियन पाउनुहुनेछ। ध्यानले तपाईलाई दिमागलाई शान्ति प्रदान गर्दछ।
वृषभ: २१ अप्रिल-२१ मे
आजको दिनबाट समाजले विशेष सम्मान पाउने भए राम्रो दिनको लागि कोही पनि सोध्न सक्दैन। सामाजिक योजनाहरू तपाईंको लागि असाधारण लाभदायक साबित हुनेछ। तपाईंको नजिकका व्यक्तिहरूले पनि तपाईं प्रति उनीहरूको पूर्ण समर्थन बढाउँछन् त्यसैले अगाडि बढ्नुहोस् र दिनले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दछौं।
यो पनि पढ्नुहोस्: राशि चिन्हहरूको लागि चार उत्तम क्यारियर विकल्पहरू
मिथुन: २२ मे २१ २१ जुन
यो मिथुनलाई रमाउनको लागि समय हो किनकि व्यापारले नाफा कमाउने भविष्यवाणी गरिएको छ। शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्ति वा विद्यार्थीहरूले सफलता हासिल गर्छन्। यो एक नयाँ समयको शुभकामनाको रूपमा नयाँ व्यापार उद्यम शुरू गर्न को लागी शुभ समय हो र सबै चीज स्थानमा खस्नेछ।
क्यान्सर: २२ जुन -२२ जुलाई
प्रतिबद्धता सम्बन्धी तनाव उच्च हुन सक्ने कारणले आज मानसिक समस्याहरूले तपाईंलाई दिक्क पार्न सक्छ। तपाईले दिनभर उर्जाको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ तर मानसिक अस्थिरताले तपाईका धेरै कार्यहरूमा बिगार्न सक्छ। तपाईका समस्या भएका शब्दहरूको ख्याल राख्नु राम्रो हुन्छ यदि तपाई समस्याबाट टाढा रहन चाहनुहुन्छ भने।
सिंह: २ July जुलाई -१ August अगस्ट
शक्तिशाली सिंह, तपाईं सफलता संग पुरस्कृत हुनेछ कि पनि न्यून परिश्रम संग। तपाईंको स्वास्थ्यलाई थप ध्यान दिन आवश्यक हुनेछ। यद्यपि यो तपाइँको प्रकृति बिरूद्ध हुन सक्छ, तपाइँ चीजहरूको बारेमा धेरै धैर्यता हुनु आवश्यक छ किनकि यसले अन्ततः तपाइँको लागि नाफा लिनेछ।
कन्या: २२ अगस्त - २ September सेप्टेम्बर
भ्रम तपाईंको दिनका अधिकांश भागहरूमा तपाईंको लागि परिवार वा साथीहरूसँग झगडा हुने क्रममा हुनेछ। तपाईं आफैंमा केही झगडामा पर्न सक्नुहुन्छ। तर आज चीजहरू तपाईंको लागि राम्रो हुनेछ यदि तपाईं आफैंलाई विवादबाट टाढा राख्नुभयो भने।
तपाइँको साथी मित्र को लागी तपाइँ को लागी भावनाहरु छन्
तुला: २ September सेप्टेम्बर -२ October अक्टुबर
तपाईंको राम्रो सोचले तपाईंलाई समाजमा आदर बढाउन मद्दत गर्दछ। आजका चीजहरूले तपाईंलाई बिभिन्न व्यक्तिसँग सम्पर्क बनाउन र सम्पर्कहरू बनाउन मद्दत गर्दछ। अन्य चीजहरूको, आज तपाईले अनुभव गर्नु भएको रोमाञ्चक कुरा भनेको आश्चर्यजनक पाक भोज हो जुन तपाईले चाँडै नै भेट्ने भविष्यवाणी गर्नुभयो।
वृश्चिक: २ October अक्टोबर - २२ नोभेम्बर
तपाईंको विचारहरूको श्रृंखला रहेको भविष्यवाणी गरिएको छ जुन अन्ततः तपाईंको उमेर प्रतिबिम्बित गर्दछ। विचारहरूको आदानप्रदान हुन्छ जब तपाईं नयाँ व्यक्तिहरूसँग मिसिनुहुन्छ। यद्यपि, तपाईंले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई भगवानको लागि यसलाई सुधार गर्ने दिशामा काम गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ।
धनु: २ November नोभेम्बर-२२ डिसेम्बर
प्रिय Sagittarians सावधान रहनुहोस् किनकि तपाईंले आफ्नो व्यवसायमा केही अवरोधहरू अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई आफ्नो कार्यहरूको पूर्वप्रदर्शन गर्न र समस्याको कारण व्यवसायमा रहेको क्षेत्र पहिचान गर्न प्रयास गर्ने र तिनीहरूमा काम गर्ने सल्लाह दिइन्छ। उज्ज्वल पक्ष मा, तपाईं नयाँ साथीहरूलाई पनि भेट्न सक्नुहुनेछ जहाँ तपाईंको साथीहरूसँग आउटिंग योजना गर्न सक्नुहुन्छ।
मकर: २ December डिसेम्बर-२० जनवरी
तपाईंको प्लेटफर्ममा धेरै चीजहरू भएको कारण तपाईंको तालिका पूर्ण रूपमा आजका लागि बाहिर निस्कन सक्छ। तपाईको दिनको सुरूवात राम्रो नहुन सक्छ तर दिउँसो पछिको समयले तपाईंलाई विशेष गरी लाभ पुर्‍याउने बस्तुहरू सुधार हुनेछन्। यद्यपि खुशी र आनन्द तपाईको घरेलु जीवनमा प्रबल हुन्छन्।
कुम्भ: २१ जनवरी-१ February फेब्रुअरी
एक्वैरियनहरू अन्ततः सहज हुन सक्छन् किनकि तर्क र मुद्दाहरू अन्तमा केही दिनको कडा परिश्रम पछि समाधान हुनेछ। व्यक्तिगत मोर्चामा चीजहरू तपाईंको लागि मध्य दिन पछि परिवर्तन हुने भविष्यवाणी गरिएको छ किनकि परिवारमा अन्ततः अन्त्य हुनेछ।
यो पनि पढ्नुहोस्: राशि चिन्हहरू जुन तपाईंको सबैभन्दा खराब शत्रुहरू हुन सक्छ
मीन: २० फेब्रुअरी -२० मार्च
तपाईलाई विशेष गरी तपाईको स्वास्थ्यलाई नमिल्ने सल्लाह दिइन्छ। साथै, तपाई अरूसँग बहस गर्नबाट अलग रहनु पर्छ किनकि यसले तपाईलाई समस्या मात्र गराउन सक्छ। यात्रा तपाईका लागि कार्डहरूमा छ, तर यो निश्चित गर्नुहोस् कि यात्राको क्रममा तपाईको अत्यन्त ख्याल राख्नुहोस्।
गर्भावस्था पहिलो त्रैमासिकको समयमा मसलादार खाना
पबिक कपालबाट कसरी छुटकारा पाउने
दूध संग केरा खाने को फाइदा
कसरी काजल लाई लागू गर्ने जस्तै डिपिका पादुकोण
जुन संसारको सब भन्दा पुरानो भाषा हो
सेतो सॉसको साथ कसरी पास्ता बनाउने
म मेरो अनुहार कत्तिको बारम्बार सफा गर्नुपर्छ?